अस्पतालमा औषधि अभाव – Sajha Bisaunee
। ७ कार्तिक २०७५, बुधबार १५:४२ मा प्रकाशित
जाजरकोट, ६ कार्तिक ।
जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा औषधि अभाव भएको छ । औषधि सकिएको दुई साता बितिसक्दा पनि औषधि आपूर्ति नभएपछि उपचारको लागि अस्पताल आएका बिरामी समस्या परेका छन् ।
बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउन सञ्चालित फार्मेसीमा अत्यावश्यक औषधि सकिए पनि सम्बन्धित निकायले औषधि आपूर्तितर्फ ध्यान दिएको छैन । १५ शैयाको जिल्ला अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नति गरिएपछि जिल्ला अस्पतालबाट सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने ७२ प्रकारका औषधि पठाउन छोडेको छ । निःशुल्क औषधि आपूर्ति नहुँदा थप समस्या परेको स्थानीयको भनाइ छ । तीन वर्षअघि अस्पतालको स्तरोन्नति कागजी रूपमा गरिएपनि भौतिक पूर्वाधार र विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
विशेषज्ञ सेवा त परको कुरा सामान्य खालको उपचार सेवा पनि अस्पतालले दिन नसकेको स्थानीय विष्णु भडेलले बताए । उनले निःशुल्क पाइने औषधि पनि नपाइने र फार्मेसीमा पनि औषधि सकिएको भन्दै किन्न नपाइएकाले समस्यामा परेको बताए । फार्मेसीबाहेक अस्पताल नजिक निजी मेडिकल नहुँदा बिरामीको उपचारमा थप समस्या परेको स्वास्थ्यकर्मीले बताए । फार्मेसीमा अत्यावश्यक औषधि सकिएकोले तत्काल आपूर्ति गर्न बारम्बार माग गर्दा पनि खरिद नगरिएको फार्मेसीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी लालबहादुर बस्नेतले बताए । बिरामीको लागि आवश्यक पर्ने औषधि नहुँदा एक घण्टा टाढाको निजी मेडिकलबाट औषधि ल्याएर उपचार गर्ने गरिएको उनले बताए । जिल्ला अस्पताल र फार्मेसीमा आवश्यक औषधि
नहुँदा उपचारमा समस्या परेको डा. अमिन शाहले बताए ।
अस्पताल प्रमुख राजेन्द्र लामाले अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि अभाव भएको स्वीकार गर्दै भने ‘दसैंले गर्दा औषधि आपूर्तिमा ढिलाइ भएकोले उपचार सेवासमेत प्रभावित भएको छ । मैले तत्काल औषधि आपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छु । केही दिनमै औषधि आपूर्ति हुन्छ । स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीले फार्मेसीमा औषधि नपाउँदा समस्यामा परेका छन् । बिमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले पनि अनुगमण निरीक्षण नगर्दा सेवा प्रभाकारी हुन नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । फार्मेसीमा औषधि बिक्रीबाट संकलन भएको रकमसमेत व्यवस्थित नगर्दा औषधि खरिदमा समस्या देखिएको एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए । फार्मेसी सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल प्रमुख र लेखापालबीच समन्वय नहुँदा पनि समयमा औषधि नआएको हो ।
आठ जना विशेषज्ञसहित १२ जना डाक्टरको दरबन्दी रहेको जाजरकोट अस्पतालमा हाल एक जना मात्र कार्यरत छन् । करारमा कार्यरत डा. अमिन शाहले एक्लैले सेवा दिइरहेका छन् । दरबन्दी अनुसारका डाक्टर नहुँदा उपचार सेवा प्रभावित भएको छ । ‘म एक्लै छु । बिरामीलाई एक्लैले हेर्नुपर्छ। कहिले काहीं त खान खाने र सुत्ने पनि फुर्सद पनि हुँदैन’ डा. शाहले भने । अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत डा. धर्म रेग्मी र डा. कृष्ण जंग शाह एमडीको अध्ययनका लागि बिदामा बसेका छन् । त्यस्तै अस्पतालमा कार्यरत डा. राजेन्द्र लामा र डा. केशरजंग कार्की दसैं बिदामा घर गएर फर्केका छैनन्। करारमा कार्यरत डा. भूपेन्द्र प्रकाश मल्लको म्याद सकिएको छ ।
आठ जना विशेषज्ञ डाक्टरको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । अन्य विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन हुन नसके पनि प्रसूति सेवा सञ्चालन गर्ने गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एक जना स्त्रीरोग विशेषज्ञ काजमा पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिष्ठानबाट काजमा जाजरकोट अस्पतालमा खटिएकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. पूर्णिमा राईले गत साउन महिनाको अग्रीम हाजिर गरेर अस्पताल छोडेको समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित भएपछि प्रतिष्ठानले कारबाहीको साटो उनको काज फिर्ता गरिदिएपछि प्रसूति सेवा ठप्प छ । प्रसूतिका लागि आउने गर्भवती महिला सेवा नपाउँदा चौरजहारी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत लगायतका ठाँउमा जान बाध्य भएको भेरी नगरपालिका ४ की पशुपति शाहीले बताइन् । ‘सुत्केरी गराउन जिल्ला बाहिर जाने दिनको अन्त्य कहिले होला’ उनले भनिन् ‘जाजरकोट अस्पतालमा सामान्य खालका बिरामीको पनि भरपर्दो उपचार हुँदैन । अस्पतालमा गएका बिरामीलाई उपचारको साटो रेफर मात्र गर्ने गरिएको छ ।’